TechGameBox - Tontolo mpilalao
Ireo entana Pride maimaim-poana tonga ao amin'ny Campus Two Point rehefa navoaka
2 Jolay 2022 by Alistair McDonald
Ireo entana Pride maimaim-poana amin'ny lalao dia ho tafiditra ao amin'ny Two Point Campus rehefa hivoaka ny 9 aogositra. Ahitana entana miloko avana toy ny karipetra, lambam-pandriana, saina sy ny maro hafa ny fonosan'entana, ary ho maimaim-poana mandrakizay amin'ny sehatra rehetra. Source
Sokajy Vaovao Leave a comment
Ny Pokémon Go dev dia voalaza fa manaisotra ny 8% amin'ny mpiasa, manafoana tetikasa efatra hafa
Ny mpamorona Pokémon Go Niantic dia voalaza fa nandroaka mpikambana 85 ka hatramin'ny 90 tamin'ny mpiasany ary nanafoana ny efatra amin'ireo tetikasa fampandrosoana - anisan'izany ny lalao Transformers nambara teo aloha sy ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa teatra Punchdrunk - tao anatin'ny "korontana ara-toekarena" ho an'ny orinasa. Ao amin'ny hafatra, Hanke dia voalaza fa nanome tsiny ny fanafoanana ny tetikasa androany ary… Hamaky bebe kokoa
Lohahevitra ivelan'ny lohahevitra: mamony eo amin'ny randrana ny fitiavana ao amin'ny This is How You Very the Time War
"Ny Blue mamitaka indrindra ahy." Red manoratra amin'ny Blue. Namela ny taratasiny tao anaty vilany misy rano mangotraka tao anaty milina MRI izy. Blue manoratra amin'ny Red. Namela ny taratasiny tao anaty magmà izy rehefa rava i Atlantis. Tsikelikely, tonga saina aho fa ity - inona ilay teny adino? - epistolary… Hamaky bebe kokoa
Jereo eto ny Nintendo Direct anio
1 Jolay 2022 by Alistair McDonald
Farany, manana Nintendo Direct mety amin'ny fandaharam-potoana izahay. Mankanesa amin'ny 2 ora tolakandro UK ho an'ny fampisehoana fanambarana maharitra 25 minitra, mifantoka amin'ny lalao an'ny antoko fahatelo. Andraso ny fijerena ny lalao Switch nataon'ny orinasa hafa ankoatry ny Nintendo - noho izany, tsy manantena ny vaovao Zelda: Breath of the Wild 2 eto. Source
I Hideo Kojima dia nanomana tetikasa superhero toy ny The Boys an'ny Amazon
Nambaran'i Hideo Kojima an'ny Death Stranding fa efa nahandro tetik'asa mitovy amin'ny andiany superhero an'i Amazona The Boys izy. "Niala aho taorian'ny fizarana telo tamin'ny vanim-potoana voalohany," hoy i Kojima nanoratra tao amin'ny Twitter, niresaka momba ilay andiany. “Nieritreritra aho fa hijery ny ambiny amin'ilay fandaharana. Raha ny marina, nijery fizarana vitsivitsy izay natolotra tao amin'ny… Hamaky bebe kokoa
Ny indostrian'ny lalao video Québec dia hisy fiantraikany amin'ny lalàna momba ny fiteny mampiady hevitra
Ny orinasan'ny lalao video ao Québec dia hisy fiantraikany amin'ny lalànan'ny fiteny vaovao mampiady hevitra. Ny tanjon'ny volavolan-dalàna 96 dia ny hanamafisana ny lalànan'ny teny frantsay ao amin'ny faritany miteny frantsay, hiantohana ny teny frantsay ho fiteny ampiasaina amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny raharaham-barotra ka hatramin'ny fitsaboana. Na izany aza, ahiana handroaka ireo tsy miteny frantsay amin'ny indostrian'ny lalao video be ao Québec izany. … Hamaky bebe kokoa
Ny remaster Blade Runner voatsikera amin'izao fotoana izao dia misy dikan-teny tsy remastered amin'ny Steam
Dev dia nibitsika ny sary voalohany an'ny PS VR 2 any anaty ala, mamafa azy
Fantatsika rehetra fa eny an-dalana izany, fa ny PS VR2 dia mbola mistery ho an'ireo izay tsy mahalala ny fiasan'ny Sony. Na izany aza, ny mpamorona iray dia nizara (ary nesorina haingana) sarin'ny PS VR2 napetraka ao amin'ny tontolo tena izy. Ny sary dia avy amin'ny Bit… Hamaky bebe kokoa
Ny patch PC vaovao an'ny Resident Evil dia mampandefitra ny sary ary mamely mafy ny fahombiazany
30 Jona 2022 by Alistair McDonald
Tsy dia manana zavatra tsara holazaina aho, saingy tsy misy isalasalana momba izany: ny fanohanan'ny ray tracing dia mampisondrotra ny kalitao amin'ny ankapobeny, indrindra satria ny taratry ny RT dia manolo ny taratry ny habaka-efijery mahatsiravina hita amin'ny dikan-teny taloha. Ny hazavana eran'izao tontolo izao traced taratra dia teboka tsara ihany koa, manolo ny fanakanana ambient amin'ny efijery amin'ny marina kokoa… Hamaky bebe kokoa
Harvesella dia toa ny Final Fantasy mihaona amin'ny Stardew Valley
Harvesstella dia fiainana vaovao RPG vaovao avy amin'ny Square Enix tonga amin'ny Switch sy Steam amin'ny volana Novambra. Ny Final Fantasy dia mihaona amin'ny Lohasahan'i Stardew, miaraka amin'ny kilalao ao anatin'izany ny fikarakarana voly, ny fisakaizana amin'ny mponina ao an-tanàna, ary ny fijerena ny fonja. Ny art concept dia avy amin'i Isamu Kamikokuryo amin'ny lazan'ny Final Fantasy 12, ary ny mozika dia avy amin'i Go Shiina avy amin'ny andiany Tales. … Hamaky bebe kokoa
Gmail ho an'ny Android, iOS dia manampy famantarana 'Storage ampiasaina'
30 Jona 2022 by famantarana
Ao amin'ny tranonkala, Gmail dia nanamarika hatry ny ela ny habetsahan'ny fitahirizana ampiasainao any amin'ny farany ambany amin'ny pejy. Ao amin'ny Gmail ho an'ny Android sy iOS izao ny famantarana "Fitahirizana ampiasaina" mba hamonjena anao tsy mila manokatra fampiharana na tranokala hafa momba ny fitantanana ny habaka. Bebe kokoa…. Lahatsoratra tany am-boalohany
Sokajy TECH Leave a comment
RIP RTX 3080 12GB - tsy tokony ho nisy ianao tamin'ny voalohany
Nvidia dia heverina fa nampiato ny famokarana ho an'ny karatra grafika GeForce RTX 3080 12GB, ilay variana mahery kokoa amin'ny RTX 3080 GPU tany am-boalohany. Zava-dehibe ny manamarika fa tsy fanambarana ofisialy izany ka raiso ity fampahalalana ity miaraka amin'ny sira kely, fa ny mpampiasa Twitter sy ny mpankafy GPU @Zed_Wang dia nilaza fa tsy hisy ny karatra… Hamaky bebe kokoa
Sokajy FAMERENANA Leave a comment
Asus ROG Phone 6 ho avy amin'ny 5 Jolay miaraka amin'ny fanoherana rano ary mpankafy mangatsiaka hafa
Ny filaharana Asus ROG Phone dia feno safidy mahery vaika sy vita tsara, ary efa akaiky ny modely vaovao. Miaraka amin'ny fivoahana sasany, manana ny datin'ny famoahana ny Asus ROG Phone 6 isika izao. more… Original Article
pejy1 pejy2 ... pejy3,969 Manaraka →
© 2022 TechGameBox • Namboarina miaraka GeneratePress